Soo-saarista Chip Alwaaxda Shiinaha & Warshad | Zhanyu
· Cabbirka: M3.5 / M4 / M5 / M6
· Dhamee: Madadaalo fosfoor / Zinc dahaadhay
· Midab: Madow / Caddaan / Jaale
· Qalabka: C1022A
· Xirxirida: 25kg Bac / Sanduuq leh kartoon
Boolalka Chipboard waa nooc ka mid ah wax soo saarka kaas oo ku habboon rakibidda qalabka korontada ka dib habka daaweynta kuleylka. Waxaa badiyaa loo isticmaalaa isku xidhka iyo isku xidhka taarikada qoryaha iyo taarikada qoryaha iyo taarikada birta khafiifka ah. Cabirku waa m3-m6, maaddadu waa c102a awood sare leh, daaweynta dusha sare waa la galvanized, midabku guud ahaan waa jaalle, buluug iyo caddaan.
Dhammaan warshadaha dhejiska, sheygan ayaa muhiim u ah sida darbiga qalalan oo uu leeyahay mug ballaaran oo iib ah. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa wax soo saarka alaabta guriga iyo warshadaha kale, laakiin wali wey ku xadidan tahay suuqa DIY. Waqtigan xaadirka ah, macaamiisha gudaha waxay iibsadaan noocyadan kala duwan dukaamada alaabada dhismaha, inta badan loo isticmaalo rakibidda biraha hagaha, fiilooyinka (sida 3.5 * 16, iwm), rakibidda ballaarinta kalluunka (sida 4 * 40, iwm), iyo beddelidda alwaax boolal lagu rakibo laguna soo saaro alaabta guriga iyo armaajooyinka. Tayada ayaa ka sii fiican, saxanka yuan Ling ee ay soo saartay Shanghai hangtou qaybaha caadiga ah ee warshaddu way ka fiican tahay oo qiimaha baakadka tayada ayaa ka sii wanaagsan Waa mid dhaqaale iyo dhaqaaleba leh dhinac walba. Mashiinka xoqida boodhka goynta badaha ayaa ah badeecad soo hagaagtay oo fareebka caadiga ah. Waxaa badanaa laga hagaajiyaa naqshadeynta dunta, raacidda xawaaraha qodista sare, iyo xallinta dhibaatada dildilaaca oo si fudud ay u keento isticmaalka alwaax adag, iyo waxyaabaha farsamada ku jira ayaa sarreeya.
Ilaa xad, waxay beddeli kartaa isticmaalka qoryaha caadiga ah (qoryaha qoryaha iyada oo aan la daaweyn kuleylka). Isla mar ahaantaana, boolal alwaax ah waxaa soo saaray teknolojiyaddii yaraynta ushii ugu horreysay ee ay soo bandhigtay AIDS-ka markii ugu horreysay ee ay soo bandhigtay AIDS-ka, taas oo aan kaliya keydineynin maaddooyinka, laakiin sidoo kale ka dhigeysa xargaha fiiqan
Hore: Mawduuc aan caadi ahayn oo dunta keliya lagu xiro
Xiga: CSK boolal madaxa isku qodista
Truss madaxa boolal qodista madaxa
Steel carbon tayo sare leh DIN934 hexagon lowska m3 ...
Qalabka xarkaha fiilooyinka, qalabka wax lagu xiro, flange ...